2 Mpanjaka 11 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
2 Mpanjaka 11:1-21
11 Rehefa hitan’i Atalia+ renin’i Ahazia+ fa maty ilay zanany, dia naripany avokoa ny tarana-mpanjaka.+ 2 Nalain’i Joseba,+ zanakavavin’i Jorama Mpanjaka sady anabavin’i Ahazia, anefa i Joasy+ zanak’i Ahazia, ka nangalariny avy teo amin’ireo zanaky ny mpanjaka efa hovonoina. Dia nataony tao amin’ny efitra anatiny nisy ny fandriana i Joasy sy ilay vehivavy mpampinono azy. Koa nafenina+ tsy ho hitan’i Atalia i Joasy, ka tsy novonoina. 3 Nafenina tao an-tranon’i Jehovah enin-taona izy, niaraka tamin’ilay vehivavy, raha mbola nanjaka nanerana ilay tany i Atalia.+ 4 Ary tamin’ny taona fahafito dia nampanalain’i Joiada+ ny lehiben’ny zato tamin’ny Karianina+ mpiaro ny mpanjaka sy ny lehiben’ny mpihazakazaka,+ ka nentiny nankany aminy tao an-tranon’i Jehovah. Dia nanao fifanekena+ tamin’izy ireo izy, ary nampianiana+ azy ireo tao an-tranon’i Jehovah. Avy eo dia nasehony azy ireo ilay zanaky ny mpanjaka. 5 Dia nomeny baiko ireo hoe: “Izao no hataonareo: Ny ampahatelony aminareo izay miditra amin’ny andro sabata, dia hiambina tsara ny tranon’ny mpanjaka,+ 6 ary ny ampahatelony ho eo amin’ny Vavahadin’ny+ Fototra, ary ny ampahatelony ambiny ho eo amin’ny vavahady ao ambadik’ireo mpihazakazaka. Ary hifandimby hiambina tsara ny tranon’ny mpanjaka+ ianareo. 7 Ny antokony roa aminareo izay tokony hivoaka amin’ny andro sabata no hiambina tsara ny tranon’i Jehovah, mba hiarovana ny mpanjaka. 8 Koa hodidino ny mpanjaka, ka samia mitana ny fiadiany avy. Ary hovonoina ho faty izay rehetra mitsofotsofoka eo amin’ireo laharana. Araho foana ny mpanjaka, na mivoaka na miditra.” 9 Dia nanao araka izay rehetra nandidian’i Joiada mpisorona ireo lehiben’ny zato,+ ka samy naka an’izay olom-peheziny, dia izay niditra tamin’ny andro sabata+ sy izay nivoaka tamin’ny andro sabata. Dia nankao amin’i Joiada mpisorona izy ireo. 10 Dia nomen’ilay mpisorona an’ireo lehiben’ny zato ny lefon’i Davida Mpanjaka sy ny ampingany boribory, izay tao an-tranon’i Jehovah.+ 11 Ary nijoro ny mpihazakazaka+ ka samy nitana ny fiadiany avy, nanomboka teo amin’ny lafiny ankavanan’ny trano ka hatreny amin’ny lafiny ankavian’ny trano, sy teo akaikin’ny alitara+ ary teo akaikin’ny trano. Ary nisy koa nanodidina ny mpanjaka. 12 Avy eo dia navoakany ilay zanaky+ ny mpanjaka, ka nataony teo ambony lohany ny diadema+ sy ny horonam-boky misy ny Lalàna,+ ary nataony mpanjaka izy.+ Koa nanosotra azy ho mpanjaka izy ireo.+ Dia nitehaka izy ireo,+ sady nilaza hoe: “Ho ela velona anie ny mpanjaka!”+ 13 Rehefa ren’i Atalia ny firodorodon’ny olona nihazakazaka, dia nankany amin’ny vahoaka tany an-tranon’i Jehovah avy hatrany izy.+ 14 Dia hitan’i Atalia ny mpanjaka nitsangana teo akaikin’ny andry,+ araka ny fomba fanao. Teo akaikin’ny mpanjaka koa ireo lehibe sy ny mpitsoka trompetra.+ Hitany koa ny vahoaka manontolo nifaly+ sy nitsoka trompetra. Dia norovitin’i Atalia+ avy hatrany ny akanjony, sady niantso mafy izy hoe: “Fikomiana! Fikomiana!”+ 15 Nobaikoin’i Joiada mpisorona anefa ny lehiben’ny zato voatendry hitari-tafika,+ hoe: “Avoahy eny ivelan’ny filaharana izy. Ary izay rehetra manaraka azy, dia vonoy amin’ny sabatra!”+ Efa nilaza mantsy ilay mpisorona hoe: “Aza vonoina ao an-tranon’i Jehovah izy.” 16 Koa nosamborin’izy ireo ravehivavy. Dia novonoiny ho faty izy,+ raha vao tongany teo amin’ny lalana fidiran-tsoavaly+ teo amin’ny tranon’ny mpanjaka.+ 17 Avy eo dia nasain’i Joiada nanao fifanekena+ tamin’i Jehovah+ ny mpanjaka+ sy ny vahoaka, mba hanaporofoan’izy ireo fa olon’i Jehovah izy ireo. Nasainy nanao fifanekena tamin’ny mpanjaka koa ny vahoaka.+ 18 Taorian’izay, dia nankany amin’ny tranon’i Bala ny vahoaka manontolo, ka narodany ny alitarany.+ Dia nopotehin’izy ireo tanteraka ny sariny.+ Novonoin’izy ireo teo anoloan’ny alitara koa i Matana+ mpisoron’i Bala.+ Ary nanendry mpiandraikitra hikarakara ny tranon’i Jehovah ny mpisorona.+ 19 Ary nentiny niaraka taminy ireo lehiben’ny zato sy ny Karianina+ mpiaro ny mpanjaka sy ny mpihazakazaka+ ary ny vahoaka manontolo, mba hitondra ny mpanjaka hidina avy tao an-tranon’i Jehovah. Dia teo amin’ny vavahadin’ny+ mpihazakazaka no lalan’izy ireo hankany an-tranon’ny mpanjaka. Ary nipetraka teo amin’ny seza fiandrianan’ny+ mpanjaka i Joasy. 20 Dia nifaly ny vahoaka manontolo,+ ary nandry feizay ny tanàna. Ary i Atalia efa novonoina tamin’ny sabatra teo akaikin’ny tranon’ny mpanjaka.+ 21 Fito taona i Joasy+ tamin’izy nanomboka nanjaka.+